आफन्त साथीहरू सामेल भएकाे दशैं उल्लासमा उनी नआउने रे!!!(भिडियो) – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24२७ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:५१
विभिन्न कारणले मानिसले आफ्नो जिवनलिला समाप्त पार्ने निर्णयमा पुग्छन् । विभिन्न समाचार माध्यमले प्रकाशित गरेकाे समाचारकाे आंकडा अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १६४७ जनाले आत्मा* ह*त्या गरेकाे तथ्यांकले देखाउंछ।
याे तथ्यांकलाई आधार मान्य हाे भने दैनिक ४-५ जनाले आत्मा ह*त्या गरेको देखिन्छ।
गत साेमवार धान काट्दै गर्दा आमा संग सामान्य भनाभन भएपछि सांझ सम्म पनि छाेरी घर आएनन् । आमाले यी कुरालाई सामान्य ठानिन् र कतै साथीकाेमा बसे हाेलान् भनी सम्झे। मंगलबार दिउँसो ३ वजे तिर फुटबल खेल्न गएकाहरुले छाेरी रुखमा झु’न्डिएको खबर सुनाए।
याे घटना हाे मधुवन नगरपालिका ८ बर्दियाकाे । हुलाकी राजमार्ग वाट सय मिटर भित्र मधुवन सामुदायिक वनमा पुजा पाण्डेले दशैंकै मुखमा राेजेकी बाटाे। उनी केवल १६ वर्षकी भईन् , आफन्त साथीहरू सामेल भएका दशैं उल्लासमा उनी नआउने रे!!!! उनका लागि यी सबै पराया भए संन्सारमा देखिएको रमझम-खुसी पनि विरानाे!!
भिडियो हेर्न karnali 24 युटुब च्यानलमा जानुहाेला। भिडियो साैजन्य : पवित्रा विक/सनिस चाैधरी
सन् २०३६ सम्म रुसको राष्ट्रपति पुटिननै हुन पाउने कानुन।
२५ चैत्र २०७७, बुधबार ०८:१२
इलाममा टो,’केरै श्रीमती र छोरीको ह,’त्या
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार २२:४७
दु:खकाे खबर मन्त्री पुनकाे स्वास्थ खस्किदाे २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:५१
काङ्ग्रेसको बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं २ मा चुनावी गर्मी(भिडियो सहित) २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:५१
एमाले महाधिवेशन चितवन हिँडेको गाडीमा बिचमै ढुङ्गा प्र’हार गरि राेकियाे २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:५१